Halkee laga bixiyay lacagta lagu iibiyay dhismaha Safaarada Soomaaliya ee Washington ? | Sagal Radio Services
Halkee laga bixiyay lacagta lagu iibiyay dhismaha Safaarada Soomaaliya ee Washington ?
Wasiirka Maaliyada Xukuumada Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay dowladda Soomaaliya ay $4.3 Milyan oo doollarka Mareykanka ah ku iibsatay dhismaha Safaarada cusub ee Soomaaliya ku yeelaneyso magaalada Washington.
Waxa uu sheegay in lacagta lagu iibiyey dhismaha laga bixiyey Miisaaniyadda xukuumadda federaalka ah ee sanadkan 2019, gaar ahaan ku noqoshadda oo ay wasaaradu ku soo dartay, wuxuuna dhismahan oo ka kooban dhowr Dabaq ku yaalaa aagga ay ku xooggan yihiin Safaaradaha.
Dowladda Colombia oo horay u laheyd dhismahan ayaa la sheegay in laga iibiyay, waxaana ku baxday lacag dhan (Afar milyan iyo saddex boqol oo kun doolarka Mareykanka).
Sida wararku sheegayaan, Qorshaha labaad ayaa noqonayaa in dhismeyaal loo iibiyo midkood howlgalada diblumaasiyadeed ee Koonfur Afrika iyo sidoo kale Kenya.
Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo oo dhismahan cusub xariga ka jaray ayaa kula dardaarmay Diblomaasiyiinta Soomaaliya ee Washington in ay si siman ugu adeegaan, si dhowna uga war qabaan dadkeenna Soomaaliyeed ee ay mataaladda u yihiin, muhiimna ay tahay in ay ilaaliyaan midnimadooda iyo wadajirkooda.